Fanatsarana an’Antananarivo : 102 miliara Ar ho an’ny tetikasa « Lalankely III » -
AccueilSosialyFanatsarana an’Antananarivo : 102 miliara Ar ho an’ny tetikasa « Lalankely III »
03/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Na dia eo aza ny fanakorontanana ataon’ireo milaza fa depiote ho an’ny fanovana amin’izao fotoana izao, mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ny firenena. Araka izany, notontosaina omaly tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana sy fiaraha-miasa amin’ny tetikasa roa sosona teo amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB) sy ny Agence Française de Développement (AFD).
Tetikasa voalohany natao sonia tamin’izany ny fanatsarana sy fanadiovana ireo faritra eto Antananarivo sy ny manodidina amin’ny alalan’ny “Lalankely” andiany fahatelo na ny “Lalankely III”. Noho izany indrindra, vola mitentina 102 miliara Ar no hoenti-manatanteraka izany tetikasa izany, ka ny 75 miliara Ar avy amin’ny AFD, 11 miliara Ar avy amin’ny Vondrona Eoropeanina, ary 17 miliara Ar avy amin’ny fanjakana malagasy.
Voalaza fa noho ireo fangatahan’ny mponina amin’ny fanohizana ny fandaharan’asa no nahatonga ny governemanta malagasy sy Frantsa ary ny Vondrona Eoropeanina niroso tamin’ny fanatanterahana ny tetikasa “Lalankely III”, izay tsara mihoatra ireo tetikasa roa voalohany.
Raha ny voalaza hatrany, dia tafiditra amin’ity tetikasa “Lalankely III” ity ny fanamboarana ireo lalankely mampifandray ireo faritra maro eto an-drenivohitra, fiampitan’ny mpandeha an-tongotra, tohatoha-bato, paompin-drano, fanasana lamba, daba-pako, sns. Ity tetikasa ity ihany koa dia manome asa ireo mponina amin’ireo faritra mahazo izany fanatsarana sy fanamboarana izany.